पतनोन्मुख कांग्रेस र यसका सारथी शेरबहादुर देउवा! – Hacked by suliman_hacker
पतनोन्मुख कांग्रेस र यसका सारथी शेरबहादुर देउवा!
Published on ११ पुष २०७३, सोमबार १४:१६ | by किरातसंसार
| गोपाल बुढाथोकी
किनभने कांग्रेस आज किशुनजीको बाटोभन्दा धेरैधेरै नै विपरीत बाटोमा गइसकेको छ । नेपाली माटो हातमा लिएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने अवस्थामा कांग्रेस आज छैन ।
यो पार्टीमा पदाधिकारी कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय पनि नेपाली माटोमा हुँदैन । फलानो मानेन भनेर छिमेकी देशको कुनै एउटा निकायको अधिकारीतिर देखाउनुपर्ने हालतमा कांग्रेसका सभापति छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका जटिलतम समस्यामा के निर्णय गर्ने भन्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिले बोल्दैन ।
तेस्रो ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्र र मधेसका ससाना दलको बोलीमा कांग्रेसको सम्भावित निर्णय खोज्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थात्, घरेलु राजनीतिमा पनि आफै निर्णय गर्न नसक्ने लाचार हालतमा कांग्रेस छ ।
उसलाई माओवादी र मधेसवादीले नाकमा नत्थी लगाइदिएका छन् । उनीहरुले जता तान्छ कांग्रेस त्यतै जान्छ । यो कांग्रेसको मात्र विजोग होइन, समग्र लोकतन्त्रकै विजोग हो । सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको यो बेहालले मुलुककै कस्तो बेहाल छ भन्ने दर्शाउँछ ।
कुनै चुनाव नभएरै २०७४ माघ आठ आउने सम्भावना प्रबल दृष्टिगोचर हुन्छ । त्यसपछि देशको हालत के हुन्छ ? त्यसबेला देशको हालत स्पीडमा कुदेको मोटर भिरबाट खसेजस्तो हुनेछ । त्यो स्थिति आउँछ भन्ने सबैले बुझिसके । तर, मोटरलाई भिरबाट खस्नबाट बचाउन ब्रेक लगाउने काम भइरहेको छैन ।
कथंकदाचित स्थानीय निकायको चुनाव भयो भने पनि आमचुनाव सम्भव देखिंदैन । स्थानीय चुनाव हुने आमचुनाव नहुने भयो भने पनि कुरा उही हो, उही अर्थात् मोटर भिरबाट खस्ने हो । ठूलो संवैधानिक शून्यता आउनेछ, मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल छाउनेछ ।
प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ भने पाँच नम्बर प्रदेश फुटाइदिने मात्र नभएर समग्र मधेस एक प्रदेश बनाइदिन पनि सभापति देउवा तयार देखिन्छन् । अहिले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो पार्ने प्रयास भइरहेको छ, पूरै खुकुलो बनाउन पनि देउवा तयार छन् । हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन समेत देउवा तयार हुन सक्छन् ।
अर्थात्, नेपाली कांग्रेस पतन उन्मुख छ र यसको पतनका सारथि शेरबहादुर देउवा बनिरहेका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी पतनमा जाँदा समग्र राजनीति नै जटिलतामा फसेको छ ।
एमाले जसरी पनि चुनाव खोज्ने, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी पनि पदमा टिकिरहन खोज्ने अनि देउवा चाहिं प्रचण्डको ठाउँमा आफू सत्तासीन हुने– यही हो अहिलेको नेपाली राजनीतिको भित्री खेल र झेल ।
यी तीन शक्तिलाई एक ठाउँमा आएर साझा निर्णय गर्न नदिने वैदेशिक खेल छ । आन्तरिक खेल र वैदेशिक खेलको गठजोडले नेपाली राजनीति झनझन जटिल बन्दैछ । उपाय एउटै छ– तीन शक्ति एक ठाउँ आउनुपर्छ । कसरी आउने त ? यसरी आउने भन्ने कुनै ठोस फर्मूला अहिले भन्न सकिंदैन तर कसरी आउने भन्ने उदाहरण भने दिन सकिन्छ ।
संविधान बनाउँदा जसरी एक ठाउँमा आएका थिए, त्यसरी नै आउनुपर्छ । त्यसरी एक ठाउँमा आएनन् भने के हुन्छ ? कि राजतन्त्र पुनर्जीवित बन्ने ढोका खुल्छ कि तानाशाहीको बाटोमा मुलुक जानसक्छ ।
यी दुवै बाटोमा गएन भने मुलुकमा ठूलो अराजकता हुनेछ । देशलाई कुन बाटोमा लाने ? सबैभन्दा ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने दायित्व सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले कांग्रेसको होइन र ?
सम्पादकीय– एमाले मतदानमा जानुपर्छ! →
एमालेका यस्तो विचार, जसले मुलुक विखण्डतर्फ लान सक्छ! →
नयाँशक्तिकै नेता भन्छन्– नाम नयाँशक्ति, काम त्यस्तो भएन →
यसकारण संघीय समाजवादी छाडेँ-१ →